“Layaab ayay nagu noqotay kadib marka naloo sheegay in Ronaldo uusan imaan doonin xaflada”…Sergio Ramos – Gool FM
“Layaab ayay nagu noqotay kadib marka naloo sheegay in Ronaldo uusan imaan doonin xaflada”…Sergio Ramos
(Real Madrid) 30 Agoosto 2018. Sergio Ramos ayaa xaqiijiyay in isaga iyo ciyaartoyda kooxda Real Madrid ay layaab ku noqotay ka maqnaanshiyaha xidiga Juventus ee Cristiano Ronaldo xaflada dhawaan lagu bixiyay abaal marinta laacibka ugu fiican Yurub.
“Waxba kama ogin Cristiano Ronaldo, waan la yaabnay markii ay inoo sheegeen inuusan imaaneynin xaflada, lakiin noloshiisa waxa uu doono ayuu sameenayaa”.
Dhimaca kale difaaca kooxda kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa wuxuu ka hadlay xidiga Liverpool Mohamed Salah.
“Waxa ku dhacay isaga finalkii Champions League, waxay ahayd dhacdo lama filaan ah, waxaan u rajeenayaa saxiibadey aan isku xirfada nahay nasiib wanaagsan”.
Si kastaba Sergio Ramos ayaa sabab u noqday in uu dhaawac dhanka garabka ah soo gaaro Mohamed Salah finalkii Champions League ee xili ciyareedkii lasoodhaafay, taasoo ka caawisay ugu dambeyn inay ku guuleystaan tartankan markooda saddexaad ee xiriir ah.
Ancelotti oo sheegay in PSG iyo Liverpool ay yihiin kooxaha ugu cad cad ee ku guuleysan kara Champions League
DAAWO: Wixii Xalay Xafladii Yurub ku dhex maray Ramos iyo Maxamed Saalax!!!